सोनुकुमार सुनुवारलाई राष्ट्रपतिलाई गालीगलौज गरिएको भन्दै न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । तर, उनले जस्तै राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नेहरुले मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि पुरै जातीलाई नै गालिगलौज गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । किन ? सोनु दलित र गरिव भएकाले त होइन ।
शनिबार (२८ साउन) बिहान सात बजे पलंगबाट भुईमा खुट्टा राख्दा झन्डैझन्डै घुँडासम्म पानी थियो । राति अबेरसम्म उठेको थिएँ । त्यसैले निन्द्राबाट ब्युझने बित्तिकै पानीमा खुट्टा चोपलिँदा सपनामा हो की विपनामा छुट्टयाउन कठिन भयो । कसैले बाथरुमको धारा खुल्लै छाडेकोले कोठामा पानी छिरेको हो की भनेर श्रीमतीलाई सोधेँ ।
विधेयकमा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) बन्द गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । सन् २०१२ मा पनि दर्ता भएर असफल भएको यस्तो विधेयक यो पटक के हुन्छ त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म यस्तै परिणाम आउँछ भन्न सकिन्न । तर, डीभी बन्द हुन लाग्यो भनेर समाचार बनाउने र यो समाचारबाट खुशी वा दुःखी हुनुपर्ने कारण के हो त्यो भने मैले बुझ्न सकेको छैन ।
डेकेन्द्र बाँचेका भए...
उहाँले पत्रकारिता गर्दा माध्यमिक तहमा पढ्दै थिएँ । अपहरण, हत्या हुँदा प्लस टु पढ्दै थिएँ । त्यसैले उहाँसंग संगत हुने, चिनजान हुने मौका नै थिएन । परिचित नहुँदा उहाँको स्वभाव, आनीबानी, प्रेरणाबारे कुनै याद हुने कुरा पनि भएन । जब पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । तब सुनिएको नाम हो यो, अर्थात् डेकेन्द्रराज थापा ।
तपाई जसको भरमा र घरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कतिको बिश्वासिलो व्यक्ति हो त्यो राम्रोसँग बुझ्नुस् है । तपाईं नेपालमा हुँदा म छँदैछु भनेर भन्ने तर यहाँ आउन लागेको समय तर्केर हिड्ने कयौं व्यक्तिहरु हुन्छन् । जसको भरमा अमेरिका आयो त्यो व्यक्ति एअरपोर्टमा लिन नआएर बिचल्ली परेको घटनाहरु पनि भएका छन् ।
माओवादीमा 'कोर्स करेक्सन' को उपाय : सामाजिकीकरण
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको नतिजापछि माओवादीभित्र चुनाव हारको 'फ्याक्टर’ खोज्न थालियो । परम्परागत सोच, संगठनका ढाँचा, कार्यकर्ता परिचालन, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतमा देखिएका कमिकमजोरीलाई चुनाव हारको मुख्य ‘फ्याक्टर’ का रुपमा धेरै नेता र कार्यकर्ताले विश्लेषण गरे । जुन दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि यही तरिकाले भनिएको थियो ।
खाडीमा एनआरएनएका सवालहरु
मध्यपूर्वमा गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को सदस्य किन बन्ने ? नेतृत्वमा को जाँदा के हुन्छ र ? मध्यपूर्वमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत झन्डै १७ लाखले बारम्वार यस्ता बिषय उठाइराख्छन् । जव जव एनआरएनएको अधिवेशनहरु हुन थाल्छन्, नयाँ सदस्य वन्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यतिखेर आम रुपमा यि बिषयप्रति प्रश्न उठ्न थालिहाल्छ ।